Dhibaatada Uu Leeyahay Telefoonka Lagu Hadlo Isaga Oo Ku Jira Dabka (Charging mobile)
Dhibaatada Uu Leeyahay Telefoonka Lagu Hadlo Isaga Oo Ku Jira Dabka (Charging mobile) 0 July 29, 2015 in Articles by Staff SLL Media News Reporter Visits: 2375
W/Q. Diyaariye: Cabdirisaaq Axmed Axmed DALMAR
W/Q. Diyaariye: Cabdirisaaq Axmed Axmed DALMAR Dhibaatada uu leeyahay telefoonka lagu hadlo isaga oo ku jira dabka (Charging mobile)
(SLL)- Dad badan ayaa isticmaala ama ku hadla mobile-ka gacanta lagu qaato isagoo ku jira dabka (Charging Mobile). Waxaa kale oo dhacda in dad badan ay kaga telephoneka gacanta lagu qaato isagoo ku jira dabka.
Daraasad lagu daabacay jariirada Al-Ahram ee ka soo baxda waddanka Masar ayaa koox dhakhaatiir ah waxaa ku sameeyeen baadhitaan dhibaatada uu Telefoonka gacanta lagu qaato.
Dhakhaatiirtan ayaa waxaa ay sheegeen dhibaatada uu leeyahay telefoonka gacanta lagu qaata marka uu ku jiro dabka (Charging).
waxaana ay sheegeen inuu sababi karo.
1.Dillaac ku immaada durbaanka dhegta (Ear-drum)
2.In uu ku qarxo dhegta, sababana dhego la’aan
3.Malax badan oo ka timaada dhegta
4.Dhego cus la’aan
waxaa kale oo uu sababa telephoonka lagaga tago guryaha isagoo dabeysmaya, gubsho ku timaada guri. waxaa kale oo uu sababi karaa mobile-ka lagaga tago isagoo dabka ku jira inuu baa'biyo hanti badan iyo xoolo mood iyo noolba.
Khuburadan baadhitaanka iyo daraasadda sameeyneysey ayaa waxaa ku soo gunaanadeen baadhitaankoodan inay dadku iska illaaliyaan inay kaga tagaan mobila oo dabka ku jira.
sidoo kale uu qofka isticmaalaya uu iska ilaaliyo inuu ku hadlo mobilka isagoo dabka ku jira.